केहि समय अगाडी मेरा एक साथीले फेसबुकमा आफ्नो status मा लेखेका थिए 'भुक्का जिन्दगी'। मलाई त्यो status ज्यादै मार्मिक र यथार्थपरक लागेको थियो। 'भुक्का' शब्द आजकालका स्कुले, +२, क्याम्पस पढ्ने युबाहरु माझ लोकप्रिय शब्द हो, जस्को अर्थ पैसा नभएको भनेर बुझिन्छ।
मेरा साथीको उक्त status घरबाट पठाएको सिमित पैसाले आफ्न सबै आवश्यकताहरु पुराउनु पर्ने बाध्यता र आफ्न असीमित ईच्छा बिचको द्न्दको उपज जस्तो लाग्छ र यो कुरा विद्यार्थी जीवनको कटु यथार्‍थ पनि हो।
तपाईंको मोबाईलमा ब्यालेन्स लो भएको छ रिचाज गर्नु होला भन्दै मोबाईलमा बोल्ने युबती, तेसै गरी १० ,१५ रुपैया transfer गर्दे न भन्दै हिंड्नु पर्ने स्थिती, कपी कलम किन्दा पैसा तिरिदे न भनेर साथीलाई भन्नु पर्ने स्थिती आदीले भुक्का जिन्दगीलाई जनाउछन।
कहिले कही एस्तो जिन्दगीले आफ्नै साथीबाट पनि पर-पर लादो रहेछ। पैसा लिएर पनि तिर्न सकिएन भनी लुकी-लुकी हिंड्न वाध्य बनाउदो रहेछ। भेट भएमा पैसा पचाएको नि होइन र नदिने पनि छैन भन्न वाध्य पर्दो रहेछ। नयाँ - नयाँ बहना बनाउन पनि सिकाउदो रहेछ। मित्रसँग पैसा फुत्काउनका लागि झुटको खेती गर्न पनि सिकाउदो रहेछ अफुले लिएको पैसा तिर्ने मामलमा, नचाहेरै पनि फाटो ल्याउदो रहेछ , यो भुक्का जिन्दगी।
गाउघरमा भुक्का भए नि खासै फरक पर्दैन तर पाइला पिक्छे पैसा चैहिने यो शहरमा भुक्का हुनु र नहुनुको बिशेष अर्थ हुदो रहेछ। चाहे राम्रो साथी बनाउन होस् या केटा वा केटी साथी बनाउन नै होस् , राजनीतिमै अगाडि बढ्न नि पैसा आबश्कता पर्दो रहेछ।
धेरैका बाबु-आमाले छोरा छोरी माथि लगानी गरिरहेका छन्, आँफै भुक्का हुने गरी; ताकी आफ्ना सन्तान भुक्का हुन नपरोस। भुक्का जिन्दगी बिताउन नपरोस।
हुन त भुक्का देशमा जन्मेर भुक्का हुनु पनि खासै ठुलो कुरो त होइन तर जब मान्छे नैतीक, सामाजिक र राजनितिक् रुपमा भुक्का हुन्छ तब मान्छे, मान्छे रहदैन। मान्छे रुपको पशु हुन्छ। मान्छे भुक्का भएर जन्मेको थियो र मर्दा पनि भुक्कै भएर मर्छ। आखिर अरबपती भए पनी मर्दा के लान्छ? भुक्का हुनुहुन्छ ? चिन्ता नगरनुस् म पनि भुक्का नै छु !
Labels: पैसा, भुक्का, भोगाइ
deAd dr@gGer Sunday, February 13, 2011 9:51:00 AM
top 1, ma pa join garchu bhukka toli ma!!!